1. januar 2018 - NorSom News
Xaqiijin: Mid kamid ah dhalinyaradii Trandum ku xirneyd oo Muqdisho laga dajiyay, iyo kuwa kale oo isbuucan la tarxiilo doono.
Norsomnews - 1. januar 2018 0
Waxaan maalmo kahor soo bandhignay warbixinta dhowr dhalinyaro soomaali ah, kuwaas oo ku xiran xero-xabsiyeedka Trandum. Mid kamid ah dhalinyaradaas ayaa khamiistii lasoo dhaafay...
Germany oo laga dhaqangaliyay sharciga xakamaynta nacaybka ee baraha bulshada.
Dawladda Jarmalka ayaa billaabaysa dhaqangalinta sharci baraha bulshada ka dalbanaya in ay si degdeg ah uga saaraan hadallada nacaybka ah, wararka been abuurka ah...
Xeer Cusub: Qofka magangalyada codsado, waxaa loo ogolaan karaa inuu shaqeeyo, inta uu jawaabta codsiga sugayo.
Norsomnews - 1. januar 2018 1
Wixii ka bilowdo sanadka cusub waxaa dhaqangali doono xeer cusub oo qofka Norway magangalyada soo weydiisto(iska dhiibo) u fasaxaya inuu codsado ogolaanshaha shaqada, inta...
Daawo: Muhiimada maareynta waqtiga iyo saameynta weyn ee noloshaada uu ku leeyahay
Isbadal lagu sameeyay sharciga soo galootiga: Turjubaanada oo laga rabo inay warqad cadeyn booliska ka keensadaan
Waxaa sanadkan cusub dhaqangalay isbadal lagu sameeyay xeerka soo galootiga dalkan Norway, gaar ahaan qodobkiisa 86 a. Qodobkaas ayaa qofka turjubaanka ugu shaqeynaya hey'addaha...
Sharciyadan ayuu dhaqangalkooda maanta ka bilaabanayaan : Iska hubi
Maanta oo ay taariikhdu ku beegantahay kowda bisha January 2018, waxaa dhaqankalkoodu uu bilaabanayaa sharciyo cusub oo horey loo meelmariyay. Waxaa kamid ah: Waxaa...
Tirada soomaalida lagu dilay South Africa oo sanadkii 2017 aad u korortay:
Koonfur Afrika waxa ay kamid tahay dalalka ay soomaalidu u qaxday sanadihii bur-burka, waxaana ay halkaas ka furteen ganacsiyo yar yar iyo waliba kuwa...